Nhau - 2019 Russian Exhibition
GHORIT akaenda kunoratidzira muMoscow mu2019.
Chiratidziro Zita: Magetsi network eRussia-2019
Exhibition nguva: Zvita 3-6, 2019, iyo yekuratidzira nguva ndeye 4 mazuva
Nzvimbo: Moscow Exhibition Center, GAO VVC, Estate 119, Mir Prospect, Moscow, 129223
Muna 2016, misika yeRussia yemagetsi yemagetsi yaive inenge 1.8 trillion rubles. Zvinoenderana nedhata kubva kuRussia Ministry of Energy, inopfuura 60% yemidziyo yemagetsi inodarika hupenyu hwebasa.
MuRussia, inopfuura hafu yemidziyo yekugadzira magetsi ichiri kushanda kweanopfuura makore makumi matatu, uye ingangoita 60% -80% yemitsetse yekufambisa iri mugridhi yekufambisa iri kuchembera zvakanyanya. Maererano nekufungidzira neRussian Federation Grid Corporation, mumakore gumi anotevera, huwandu hwakabatanidzwa mukushandurwa kweiyo grid yekufambisa ichasvika mabhiriyoni zana emadhora ekuAmerica.
3. Chiratidziro chiyero:
Power grid mainjiniya, simba rekufambisa uye yekuparadzira michina, magetsi grid otomatiki michina, yekuparadzira network otomatiki michina, masimba ekuchinjisa masystem, magetsi system software, Ultra-yakakwira voltage kutapurirana uye shanduko michina, shanduri, yakakwira, yepakati uye yakaderera magetsi switch, switch makabati, yemaguta uye ekumaruwa magetsi grid kuvaka uye shanduko inoenderana michina, nezvimwe.
Grid oparesheni michina yekumisikidza pamhepo yekutarisa mudziyo-, kugovera network oparesheni yekudzora michina, grid system yekutarisa michina, substation kure yekutarisa system., Kusungunuka (de) icing system, inoshanda simba remagetsi muripo, reactor, yakakwira voltage bushing, mheni inosunga, insulator, Grounding mudziyo, relay dziviriro uye kushandisa michina
Instruments uye metres, magetsi emagetsi metres, waya netambo, mabhasi ducts, inodzivirira zvinhu, mota, kudzosera, ma capacitors, wedunhu mabhureki, macontactors, inverters, yakakwira, yepakati uye yakaderera magetsi magetsi emagetsi, kuvaka magetsi, emagetsi zvigadzirwa zvemagetsi, akasiyana magetsi magetsi uye magetsi ekudzivirira matekinoroji, Magetsi-ekuchengetedza tekinoroji nemidziyo, akasiyana mabhokisi-mhando zviteshi, magetsi ekugadzirisa maturusi, magetsi emagetsi akakosha ekuvaka mota, madiki emagetsi ekugadzira michina, jenareta emagetsi, michina yekupisa yemagetsi, nezvimwe.